ကြာကူလီကောင် | CeleTrend
August 28, 2020 by CeleTrend
တင်ထွန်းအိပ်ရာမှ နိုးလာသည်။ နွေရာသီဖြစ်သဖြင့် ချွေးတွေရွှဲနေသည်။ မိမိဘေးတွင် အိပ်နေသော မိန်းမဖြစ်သူ လှမူကို ကြည့်လိုက်သည်။ လှမူသည် တင်ထွန်းကို ဖင်ပေးပြီး အိပ်နေသည်။ ဖင်လုံးကြီးတွေသည် ထွားလှသည်။ ထမီမှာ ပေါင်ရင်းနားအထိလန်တက်နေသည်။
လှမူ၏အသားသည် ဖြူဝင်းပြီး ချောမွတ်လှသည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်ဟု မထင်ရအောင် အသားအရေစိုပြည်သည်။ ဖင်လုံးကြီးသော်လည်း လူမှာမဝ။ လှမူမှာ အရပ်မြင့်မြင့် လူကောင်ထွားထွား နှင့် ရုပ်ရည်မှာလည်း ချောမောပြေပြစ်လှသည်။ တင်ထွန်းမှာ ရုပ်မဆိုးလှ သော်လည်း လူကောင်က သိပ်မထွား။ ပိန်ပိန် ညှက်ညှက် လေးသာဖြစ်သည်။ လှမူထက်ပင် အရပ်အနည်းငယ်ပုလိမ့်မည်။
မနာလိုသူတို့က တင်ထွန်းကို မတန်မရာမိန်းမ ရထားသည်ဟုပင် အတင်းပြောနိုင်သည်။ တင်ထွန်းမှာ စီးပွားရေးလည်း သိပ်မချောင်လည်။ လှမူမှာ လှပင်လှသော်လည်း ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွင် နွမ်းပါးစွာနေရရှာသည်။
တင်ထွန်းတစ်ယောက် ထွေရာလေးပါးစဉ်းစားနေရင်း လှမူ၏ ဖင်လုံးကြီးကို ကြည့်ကာ မနက်စောစောစီးစီး လီးတောင်လာသည်။ တင်ထွန်းမှာ လူကောင်သေးသလို လီးလည်း သိပ်မကြီးလှ။ တောင်လွန်းမှ ငါးလက်မသာသာလောက်ပဲ ရှိလိမ့် မည်။ လန်ပြီးသား လှမူ၏ ထမီပါးလေးကို လှန်တင်လိုက်ကာ လီးကို ဖင်နှင့်ကပ်လိုက်သည်။ လှမူ၏ ကုပ်သားလေးများကို နမ်းသည်။ ချွေးစေးလေး များစို့နေသော လှမူ၏ ပုခုံးသားလေးများမှ နှစ်လိုဖွယ်ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေးကို ရလိုက်သည်။
တင်ထွန်းမယား လှမူမှာ ဘဝပေးကုသိုလ်ကံကြောင့်သာ နွမ်းပါးနေရရှာသည်။ ယှဉ်ကြည့်လျှင် နာမည်ကျော်မင်းသမီးများထက် လှပပေသည်။ လှမူ ရုတ်တရက်နိုးလာသည်။ မျက်လုံးလေးများကို မှေးကာ ဆက်မှိန်းနေသည်။ တင်ထွန်းလည်း တောင်နေသောလီးကို တံတွေးအသာဆွတ်ပြီး ဖင်လုံးကြီး များကြားမှ လျှိုကာ လှမူ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ အသာလေး ထိုးသွင်းလိုက်သည်။
လီးသေး၍လားမသိ တင်ထွန်းလီးတချောင်းလုံး လှမူ၏ဖောင်းကား နေသော အဖုတ်ကြီးအတွင်းသို့ လျှောလျှောရှူရှူ ဝင်သွားသည်။ လှမူမှာ တုတ်တုတ်မလှုပ်ပဲ ဆက်အိပ်နေသည်။ တင်ထွန်းသည် လီးပိန်လေးကို ကပ် ညှောင့်ရင်း အရသာခံနေသည်။ ခနနေလျှင် လှမူမှာ စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးပြီး စောက်ခေါင်းကို ဆွဲညှစ်ပေးလိုက်သည်။ တင်ထွန်းမှာ လီးအညှစ်ခံရသည်နှင့် မထိန်းနိုင်ဘဲ သုက်ရည်များကို ကော့ပြီး ပန်းထည့်လိုက်မိသည်။ ပြီးလျှင်လှမူ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်ပြီး ငြိမ်ကျသွားသည်။
လှမူမှာ တင်ထွန်းပြီးသွားသည် နှင့် အိပ်ရာမှထပြီး လက်နှီးစုတ်နှင့် သုက်ရည်တွေကို သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် အိမ်သာထဲသွားပြီး သေးပေါက်ကာ အဖုတ်ကို ဆေးကြောနေသည်။ တင်ထွန်းမှာတော့ လီးပျော့လေး တန်းလန်းနှင့် အိပ်ရာပေါ်တွင် မှိန်းပြီးကျန်ခဲ့သည်။ ခနမှိန်းပြီး တင်ထွန်း ရေမိုးချိုးကာ လှမူပြင်ပေးသော မနက်စာကို စားလိုက်သည်။ ပြီးလျှင်အလုပ်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။
လှမူမှာတော့ အိမ်မှုကိစ္စ ရှင်းလင်းရင်း အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည်။ တင်ထွန်းအလုပ်တွင် အဆင်မပြေ။ သူ့အလုပ်က ခရီးသွားလမ်းပြအလုပ်။ ဒီနေ့ ခရီးသည်မရှိ။ အလုပ်ရှင်က ဆောရီးဟုပြောပြီး တင်ထွန်းကို ပြန်လွှတ်လိုက်သည်။ တင်ထွန်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီး ခေါင်းငိုက်စိုက်နှင့် ဘတ်စ်ကားစီးကာ သူတို့နေသော ခြောက်ထပ်တိုက်ခန်းကျဉ်းလေး ဆီသို့ပြန်လာခဲ့ရ သည်။
အိမ်ရှေ့ပေါက်ရောက်တော့ မနက် ၁၀ နာရီသာသာရှိဦးမည်။ အိမ်ရှေ့တံခါးကို အထဲမှ သော့ခတ်ထားသည်။ သော့ဖွင့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်မည် လုပ်ပြီးမှ ဖိနပ်စင်ဆီသို့ အမှတ်တမဲ့ မျက်လုံးရောက်သွားသည်။ ဖိနပ်စင်ပေါ်တွင် ယောက်ျားစီးဖိနပ်တစ်ရံ။ တင်ထွန်းစိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားသည်။ ဧည့်သည်များလား။ ဒါဆိုလည်း ဧည့်ခန်းမှာ ဘယ်သူမှမရှိ။ တင်ထွန်း သိပ်ပြီး စဉ်းစားမနေနိုင်တော့။ ထင်သလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရင်း အသာလေး အသံမထွက်အောင် သော့ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ခြေဖော့နင်းပြီး အိမ်ထဲသို့ဝင်သည်။ အိမ်ထဲဝင်လိုက်သည်နှင့် အိပ်ခန်းထဲမှ အသံအချို့ကို ကြားလိုက်ရသည်။ အိမ်မှာ ကျဉ်းလှသဖြင့် အသံကို တော်တော်ပီပီသသ ကြားရသည်။
…အင်း… အင်း….အားးး ………အိုး…….. ဖတ် ဖတ်…. ဗြွတ်ဗြွတ်…. အင်းးး ညည်းညူနေသော လှမူ၏အသံနှင့် ယောက်ျားတစ်ယောက်အသံ။ အသားချင်း အရေပြားချင်း ထိရိုက်သံများ။ လီးနှင့် စောက်ဖုတ် ဝင်ထွက်သံများ အတိုင်းသားကြားနေရသည်။ တင်ထွန်း၏ရင်ထဲတွင် ဗလောင်ဆူနေသည်။ အာခေါင်တွေခြောက်နေသည်။ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်လာသည်။
မိုးပြိုကျသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ လှမူ။ လုပ်ရက်လေချင်း။ သူတို့အိမ်ထောင်သက်မှာ ဆယ်နှစ်ရှိပြီ။ ငယ်ချစ်များဖြစ်သည်။ အချစ်ဦးများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ ယခုတော့ လုပ်ရက်ပြီ။ တင်ထွန်းမသိစိတ်က အိပ်ခန်းဆီသို့တွန်းပို့နေသည်။ အိပ်ခန်းကို ကာထားသော သုံးထပ်သားနံရံတွင် အပေါက်များ အမြှောင်းများ ရှိနေရာ တင်ထွန်း စိတ်ကို တင်းပြီး အခန်းထဲသို့ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ သစ်သားနံရံကြားမှ မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းမှာ ရှင်းလင်းလွန်းနေသည်။
အိပ်ခန်းထဲတွင် ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် အဝတ်မဲ့လူနှစ်ယောက် အားရပါးရ လိုးနေကြသည်။ လှမူသည် တင်ထွန်းရှိရာဘက်ကို ကျောပေးထားသည်။ မိန်းမဖြစ်သူက အပေါ်မှ တက်ဆောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ တင်ထွန်းသည် လှမူ၏ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ကိုယ်လုံးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။ တင်ထွန်းလိုးလျှင် ထမီလောက်သာလှန်ပြီး အာသာပြေလိုးရုံမျှဖြစ်ရာ လှမူ၏ ကိုယ်တုံးလုံးကို ယခုကဲ့သို့ မတွေ့ဖူးချေ။ လှမူသည် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး အောက်မှ လူကို ခွလိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လှမူ၏ ဖင်တုံးကြီး ကြွသွားလျှင် သူမ စောက်ဖုတ် ထဲဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တင်ထွန်းသည် သူ့မိန်းမကို ပက်လက်လှန်ပြီး အောက်မှ ပင့်လိုးနေသော လူကို သတိထားကြည့်လိုက် မိသည်။
ပက်လက်လှန်ထားသောလူ၏ မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရသည်။ တခြားလူမဟုတ် တင်ထွန်းတို့ အိမ်အောက်ထပ်ရှိ ကလေးသုံးယောက်အဖေ အောင်မြင့် ဖြစ်နေသည်။ အောင်မြင့်မိန်းမမှာ ကလေးသုံးယောက် မွေးပြီးကတည်းက ဝတုတ်ပြဲကြီးဖြစ်ပြီး ပုံပျက်နေပြီဖြစ်သည်။ ယခု လူယုတ်မာ အောင်မြင့်က သူများမိန်းမ အချောအလှကို ကြာကူလီလုပ်ပြီး လာလိုးနေပြီ။ သူမိန်းမ စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေသော အောင်မြင့်လီးကြီးကို တင်ထွန်းစိုက်ကြည့်မိသည်။ ညိုညိုတုတ်တုတ်လီးကြီးသည် တင်ထွန်းလီး ထက် သိသာစွာပိုကြီးနေသည်။
လှမူ၏ စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရည်တွေရွှဲနစ်နေပြီး တခြားယောက်ျား၏ လီးကြီးကို အငမ်းမရစုပ်ဆွဲနေသယောင်ပင်ထင်ရသည်။ တင်ထွန်းမှာ သူ့မိန်းမ တခြားယောက်ျားနှင့် စိတ်ပါလက်ပါလိုးနေသည်ကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်များဝဲလာသည်။ ချက်ချင်းပင် အခန်းထဲပြေးဝင်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံးကို ရိုက်နှက်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်များပေါက်လာသည်။ သို့သော် အောင်မြင့်၏ သန်မာထွားကျိုင်းသော ကိုယ်လုံးကို ကြည့်ပြီး မလုပ်ရဲဘဲဖြစ်သွားရသည်။
မတော် ပြန်ရိုက်နေမှ ပိုပြီး အရှက်ကွဲနေဦးမည်။ တင်ထွန်း အကြံတစ်ခုပေါက်လာ၍ သူ၏သူငှေးသူ့ကို အလုပ်ကိစ္စအတွက်ပေးထားသော ဟန်းဖုန်းကို အိတ်ထဲမှ ထုတ်ပြီး လှမူနှင့် အောင်မြင့်တို့လိုးနေပုံကို ဗီဒီယိုရိုက်နေမိသည်။ ဖုန်းကို နံရံအပေါက်ကြားအပ်ပြီး ရိုက်နေရာ မည်မျှကြာအောင်ရိုက်နေသည်မသိ၊ အခန်း ထဲမှ လှုပ်ရှားသံအချို့ကြားမှ သတိဝင်လာသည်။
တင်ထွန်း ကမန်းကတန်း အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ဆီသို့ပြေးသွားပြီး အိမ်အပြင်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြန်ထွက်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် အောက်သို့ဆင်းလာပြီး လမ်းမပေါ်တွင် ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်နေမိသည်။ ခနကြာလျှင် အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွေ့သဖြင့် ဝင်သောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အရက်သုံးခွက်လောက်ဝင်သွားလျှင် တင်ထွန်းအိမ်သာသွားချင်လာသည်။
အရက်ဆိုင်အိမ်သာထဲတွင်ထိုင်ရင်း ဖုန်းထဲမှ ဗီဒီယိုကို ပြန်ကြည့်မိ သည်။ လှမူ၏ ဖင်လုံးကြီးများကို ကြည့်ပြီး တင်ထွန်းတံတွေးမျိုချမိသည်။ ကိုယ့်မိန်းမ ဒီလောက်လှမှန်း အခုမှပင် သိရတော့သည်။ အောင်မြင့်မှာ မိန်းမကို အောက်မှ လီးကြီးဖြင့်ပင့်လိုးရင်း လှမူ၏ ဖင်လုံးကြီးများကို လက်ကြမ်းကြီးများဖြင့် ပွတ်ချေနေသည်။ မီးကုန်ယမ်းကုန်လိုးပြီး နှစ်ယောက်သား ဖက်လျက်က တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်ကို တင်ထွန်းကြည့်နေမိသည်။
ကြည့်နေရင်းမှ လှမူ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ အောင်မြင့်၏ သုက်ရည်များလျှံကျလာသည်။ တင်ထွန်းဗီဒီယို ကြည့်နေရင်းမှ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ရာ လီးတောင်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ မိမိမိန်းမ သူတပါးနှင့် လိုးနေသည်ကို ကြည့်ရင်း လီးတောင်နေသည့်အဖြစ်ကို တင်ထွန်း နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်သွားသည်။ လက်တစ်ဘက်က ဖုန်းကို ကိုင်ရင်း ကျန်တဘက်က လီးပေါ်ရောက် သွားသည်။
ဗီဒီယိုထဲတွင် လှမူနှင့် ကြာကူလီကောင်မှာ အဝတ်မပါ ဗလာတုံးလုံးနှင့် လီးရည် စောက်ရည်တွေ ပေကျံပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နမ်းရှုပ်နေကြသည်။ ယင်းကို ကြည့်ရင်း တင်ထွန်းမှာ ဂွင်းတိုက်မိနေသည်။ လှမူသည် အောင်မြင့်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ပြီး ထိုလူ၏ ဘေးတွင် လှဲအိပ်လိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးမှာ ဇနီးဖြစ်သူ၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဖလွတ်ကနဲ ကျွတ်ထွက်သွားသည်။ တင်ထွန်းခမျာ သူများလရည်တွေနှင့် စိုရွှဲနေသော မိမိမိန်းမ၏ စောက်ဖုတ်ဟပြဲကြီးကို ကြည့်ရင်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သုက်ရည်တွေကို အရက်ဆိုင် အိမ်သာထဲတွင် ပန်းထုတ်လိုက်ရတော့သည်။
တင်ထွန်းတစ်ယောက် အရက်ဆိုင်တွင် အချိန်ဖြုန်းပြီး နေစောင်းလောက်မှ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ မိန်းမဖြစ်သူမှာ ရေမိုးချိုးပြီး သနပ်ခါး အဖွေးသားနှင့် ယောက်ျားကို စောင့်ကြိုနေသည်။ လှမူ၏ မျက်နှာလေးမှာ အပြစ်ကင်းပြီး ထင်ရက်စရာမရှိပေ။ တင်ထွန်း အရက်တွေ မူးလာတာကို လှမူသိသွားသည်။’အကို အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့လား’ တင်ထွန်းမျက်နှာသေကြီးနှင့် အိမ်ရှေ့ကြိမ်ကုလားထိုင်တွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ အရက်အရှိန်ကလေးနှင့် နည်းနည်းတော့ ရဲတင်းနေသည်ဟု ထင်မိသည်။ တင်ထွန်း သိပ်စဉ်းစားမနေတော့ဘဲ သူ့ဖုန်းကို လှမူဆီထိုးပေးလိုက်သည်။
ဖုန်းထဲရှိ ဗီဒီယိုနေရာကို ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်သည်။ လှမူ အူကြောင်ကြောင်ဖြင့် ဖုန်းကို ယူကြည့်လိုက်သည်။ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် လွန်စွာအံ့သြပြီး ဗီဒီယိုကို ကြောင်ကြည့်နေသည်။ ခနနေမှ သတိဝင်လာပြီး မျက်နှာလေးကို လက်ဝါးနှစ်ဘက်ဖြင့် အုပ်ကာ အိပ်ခန်းတွင်းသို့ ပြေးဝင်သွားတော့သည်။ တင်ထွန်းတစ်ယောက်တည်း ဧည့်ခန်းတွင် ထိုင်ပြီး ဗီဒီယိုကို ဆုံးသည့်အထိ ဆက်ကြည့်နေမိသည်။ ကြည့်နေရင်း လီးက တောင်လာပြန်သည်။ တင်ထွန်း မူးမူးနှင့် အိပ်ခန်းထဲလိုက်သွားသည်
သူတို့အိပ်ခန်းမှာ သော့မရှိသဖြင့် လှမူမှာ သော့မခတ်နိုင်ဘဲ တံခါးလေးကို သာ စေ့ပြီး ပိတ်ထားရသည်။ တင်ထွန်း တံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်လိုက်သည်။ မိန်းမဖြစ်သူက တင်ထွန်းကို ကျောပေးပြီး အိပ်ရာပေါ်တွင်လှဲကာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုနေသည်။ ထမီပါးပါး၏အောက်မှ ဖင်လုံးကြီးတွေက တသိမ့်သိမ့်တုန်နေသည်။ တင်ထွန်း ခါးတင်ပေါ်တွင် တစောင်းဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ဘာပြောရမည် မသိဖြစ်နေ သည်။’အကို မူ့ကို သတ်ချင်ရင် သတ်လိုက်ပါတော့။ မူမှားပါတယ်’ ‘မူဘာလို့ ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာကို အကိုနားမလည်နိုင်ဘူး’ တင်ထွန်း ခြောက်ကပ်စွာပြောလိုက်သည်။
ပေါင်ကြားထဲမှ တောင်နေသောလီးကို ပုဆိုးကြားတွင် အသာညှပ်ထားရသည်။လှမူ အိပ်နေရာမှ ထပြီး လှည့်ကာ တင်ထွန်းရင်ဘတ်နှင့် မျက်နှာကို အပ်ပြီး ဖက်လိုက်သည်။’မူမှားပါတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်။’ ‘အကို့မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ’ လှမူမှာ ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ တွင်တွင်သာ ငိုနေတော့သည်။
မျက်နှာကို ရင်ဘတ်တွင်ကပ်ပြီး အပ်ထားရာမှ တောင်နေသော တင်ထွန်း၏ လီးကို လှမူတွေ့သွားသည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသောလှမူမှာ တောင်နေသော ယောက်ျား၏လီးကိုတွေ့လိုက်ရာ ချော့ဖို့ရန် အခွင့်ကောင်းရပြီးဟု ရိုးရိုးသားသားတွေးကို လီးကို လက်နှင့်အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။’မူ။ မလုပ်နဲ့။ အကိုမေးတာကိုသာ ဖြေစမ်းပါ’ တင်ထွန်းမှာ ပါးစပ်က ကန့်ကွက်နေသော်လည်း လူက မငြင်းနိုင်ဖြစ်နေရှာသည်။
လှမူ တင်ထွန်းပုဆိုးကို ဖြေချလိုက်ရာ တင်ထွန်း၏ လီးမှာ သေးသော်လည်း အစွမ်းကုန် မာတောင့်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ လက်ဖြင့်ကိုင်ထားရာမှ ခေါင်းကို နှိမ့်ချပြီး လီးကို ပါးစပ်လေးဖြင့် ငုံစုပ်လိုက်သည်။ တင်ထွန်း မျက်လုံးများမှေးစင်းသွားပြီး လောကကြီးကို မေ့သွားသည်။ လှမူမှာ လီးခနပဲ စုပ်ပေးလိုက်ရသည် တင်ထွန်းတစ်ယောက် စောက်ဖုတ်လိုးချင်လာသဖြင့် လှမူကို တွန်းလှဲပြီး ထမီကို လှန်လိုက်သည်။ မိန်းမ၏ ပေါင်လုံးကြီးများကို ထောင်ဖြဲလိုက်ပြီး ပေါင်ကြားတွင်ဝင်ကာ ဆောင့်လိုးတော့သည်။လှေကြီးထိုးပုံစံလိုးနေရင်းနှင့် လှမူ၏ ပါးလေးများ နှုတ်ခမ်းလေးများကို နမ်းရှုပ်နေမိသည်။
လိုးကောင်းကောင်းနှင့် လိုးနေရင်း တင်ထွန်း လှမူကို မေးလိုက်မိသည်။’မူ အကိုမေးတာတွေ အမှန်အတိုင်းဖြေမလား’ ‘အကို မူ့ကို ခွင့်လွှတ်မှာလားဟင်’ လှမူ အောက်မှ ပင့်ကော့ပြီးခံရင်း အဖုတ်ကို ညှစ်ရင်းမေးလိုက်သည်။ တင်ထွန်းမှာ သုက်မထွက်အောင် မနည်းထိန်းနေရင်းမှ’မသိဘူး။ အကိုမေးတာတွေကို အမှန်အတိုင်းဖြေပါ။ ”ဟုတ်ကဲ့’ ‘အောင်မြင့်နဲ့ ဘယ်နှခါလုပ်ပြီးပြီလဲ’ အမှန်မှာ လှမူတစ်ယောက် အဆင်ပြေရင် ပြေသလို အောင်မြင့်နှင့် လိုးဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပြီ။ တစ်နှစ်လောက်တောင် ကြာပြီဖြစ်သည်။ လိမ်ပြောရမလား။ အမှန်အတိုင်းပြောရမလား။ လှမူ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်အတိုင်းသာပြောတော့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
‘မူ မမှတ်မိတော့ဘူး အကို။ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။’ ထိုစကားကြားသည်နှင့် တင်ထွန်း၏ ဆောင့်ချက်များ ပိုမြန်သွားသည်ကို လှမူသတိထားမိလိုက်သည်။ မိန်းမဉာဏ်က လင်ဖြစ်သူ၏ စိတ်ကို ချက်ချင်းရိပ်မိသွားသည်။ လင်လုပ်တဲ့လူက မိမိသူများနှင့်ဖောက်ပြန်နေသည်ကို မသိစိတ်ထဲတွင် နှစ်ခြိုက်နေပုံရသည်။ လှမူမှာ ရုတ်တရက် နားမလည် နိုင်သော်လည်း ကိုယ့်ကို မရိုက်မနှက် အိမ်ပေါ်မှ မကန်ချသည့်အပြင် ယခုလို လိုလိုလားလားဖြစ်နေပုံရသဖြင့် သတိထားပြီး မီးစင်ကြည့်ကရန် ဆုံးဖြတ် လိုက်သည်။
သူနဲ့ ဘယ်လိုစလိုးဖြစ်တာလဲ’ လှမူမှာ မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီရဲလာအောင် ရှက်သော်လည်း ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်အနေအထားမို့ မလွှဲသာပဲ ဖြေနေရသည်။ ‘အိမ်မှာ လက်ဆေးဇလုံက ရေပိုက်ပျက်တာ လာပြင်ပေးရင်းနဲ့ စဖြစ်တာပါပဲ’ တင်ထွန်း လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ခန့်က ရေပိုက်ပျက်တာ မှတ်မိသွားသည်။ ရေပိုက်ပြင်ပေးရန် သူ့ကို လှမူ တစ်ပတ်လောက် ပြောနေသည်ကို သတိရမိသည်။
တစ်ပတ်လောက်နေတော့ အလုပ်သွားနေတုန်း ရေပိုက်သမားခေါ်ပြင်လိုက်သည်ဟုပြောသည်ကို ရေးတေးတေးပြန်မှတ်မိလာသည်။ ‘မှတ်မိတယ်မူ။ အကို့အပြစ်ပါပဲ။ အကို မလုပ်ပေးခဲ့မိလို့လေ။’ ‘အကို့ကို မူဘယ်တော့မှ အပြစ်မတင်ဖူးပါဘူး။ အခုတော့ အကိုအနေနဲ့ မူ့ကို အပြစ်တင်ရင် မူခံနိုင်ပါတယ်။ မူ အပြစ်အကြီးကြီးကို ကျူးလွန်မိပါတယ်။’မိန်းမက ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ပြောလိုက်ရာ တင်ထွန်း အရည်ပျော်သွားတော့သည်။
‘မူရယ်။ အကိုမူ့ကို အပြစ်မတင်ပါဘူး။ အပြစ်မြင်ရင် ဒီလို လုပ်နေပါ့မလား။ ‘ လှမူမှာ ရင်ထဲမှ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီး တင်ထွန်းကို ဖက်ကာ ငိုမိပြန်သည်။ တင်ထွန်းလည်း အောက်မှ လီးနှင့် တဖတ်ဖတ်ဆောင့်ရင်း မိန်းမအချောအလှလေးကို ဖက်ကာ ငိုချလိုက်မိသည်။’မူသူ့ကို ချစ်လား’ ‘အကို့ကိုပဲ ချစ်တာ။ မှားမိတာ သွေးသားဆန္ဒကြောင့်ပါ’မိန်းမ၏ အဖြေကို တင်ထွန်းသဘောတွေ့သွားပုံရသည်။ ပိုပြီး တင်းတင်းဖက်ကာ ဆက်လိုးနေမိသည်။’သူလုပ်တာကို ကြိုက်လား”အကို။ မူအမှန်အတိုင်းဖြေရင် စိတ်ဆိုးမှာလား’ တင်ထွန်းမှာ မိန်းမဆက်ပြောမည့်စကားကို ကြားလည်း ကြားချင်သည်။
စိတ်လည်း ပူနေမိသည်။ သို့သော်လည်း သိချင်စိတ်က ကြီးစိုးနေသဖြင့် ‘အခုတောင် စိတ်မဆိုးတာ ဘာမှ စိတ်ဆိုးစရာမကျန်တော့ပါဘူး”မူက သူ့ကို ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့လီးကြီးကို ကြိုက်တာ။ သူ့လီးက အရမ်းကြီးတော့ လိုးလို့အရမ်းကောင်းတယ်။’တင်ထွန်းမှာ သူ့မိန်းမစကားကို မယုံနိုင်စွာ ကြားလိုက်ရသဖြင့် ခေါင်းထဲတွင် ကြက်သီးများပင် ထသွားမိသည်။
မနာလို အူတိုစိတ်က တကိုယ်လုံးကို တဖိန်းဖိန်းတက်လာသ်။ သို့သော်လည်း တချိန်တည်းမှာပင် ထိုစကားကြားလိုက်ရသည်နှင့် လိုးနေသောလီးမှာ သုက်များဖြင့် ပြည့်လာပြီး တဆတ်ဆတ်ပင် တုန်ခါလာသည်။’အောင်မြင့်လီးနဲ့ အကို့လီးနဲ့ ဘယ်သူ့လီးက ပိုလိုးလို့ကောင်းလဲ”ဟီး အမှန်အတိုင်းဖြေရင် အကို စိတ်မဆိုးရဘူးနော်’ ငိုနေသော လှမူမျက်နှာလေးမှာ စပ်ဖြဲဖြဲလေးဖြစ်လာသည်။
တင်ထွန်းမှာ ဇနီးချောလေး၏ မျက်နှာလေးကို တပ်မက်စွာကြည့်ရင်း ရင်ခုန်သံတွေ အလွန်မြန်လာရသည်။’ပြော။ အမှန်အတိုင်းမပြောရင် ဖင်ကို တုတ်နဲ့ရိုက်မယ်။ ‘လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ငိုနေရာမှ စိတ်ပြန်လည် ကြည်လာပြီဖြစ်သည်။’အကို့လီးက သေးသေးလေး။ ကိုအောင်မြင့် လီးကြီးနဲ့တော့ ဘယ်ယှဉ်လို့ရမလဲ။
ဆင်နဲ့ ဆိတ်လောက်ကွာတာကို။ ဟီး။ ‘ ‘အိုး … မူ… အကိုထွက်ကုန်ပြီ… အာ…’ တင်ထွန်းမှာ လှမူ၏ စကားအဆုံးတွင် ဇနီးအရင်းခေါက်ခေါက်က မိမိ၏ လီးကို တခြားယောက်ျားလီးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ချိုးနှိမ်ပြောသည်ကို နှစ်သက်သည့်အလား လီးတန်ထဲမှ သုက်ရည်များကို လှမူ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ရှက်ရှက်နှင့် တပျစ်ပျစ်ပန်းထုတ်လိုက်မိလေသည်…..ပြီးပါပြီ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ ထူးထူးခြားခြားအင်တာနက်နဲ့စေ့စပ်ကြတဲ့ အတွဲလေး